Ciidamo ka tirsan Burundi oo maanta toogasho loogu geystay Shabeellaha Dhexe & Wararkii ugu… | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Ciidamo ka tirsan Burundi oo maanta toogasho loogu geystay Shabeellaha Dhexe &...
Ciidamo ka tirsan Burundi oo maanta toogasho loogu geystay Shabeellaha Dhexe & Wararkii ugu…
Sh/Hoose (Halqaran.com) – Ugu yaraan laba askari oo ka tirsan ciidamada Burundi ee qaybta ka ah ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM ayaa Isniintii maanta lagu dhaawacay toogasho ka dhacday meel u dhow saldhig ay ku leeyihiin Deegaanka Buurane ee Gobalka Shabeellaha Dhexe.
Askarta la dhaawacay ayaa waxaa weerar gaadmo ah ku soo qaaday rag hubeysan, sida howlgalka AMISOM uu u sheegay idaacadda laanta Af Soomaaliga ee VOA-da.
Dadka ku sugnaa meel u dhow goobta uu weerarka ka dhacay ayaa sheegay in askarta la dhaawacay la toogtay iyagoo taagan iridda laga galo saldhigga ay ku leeyihiin tuulada Buurane.
AMISOM ayaa sheegtay in toogashadu ay dhacday, xilli ay ciidamada AMISOM iridda ka fureen baabuur booyad oo rayid ah.
Dad deegaanka ayaa intaa ku daray in ay maqleen rasaas xoogan oo ka
dhaceysa meel u dhow saldhig ay ciidanka Burundi ku leeyiihin halka
loo yaqaana Biljamka.
Weerarka maanta lagu qaaday ciidanka Burundi ayaa imaanaya maalin kadib markii qarax miino lala bartimaameedsaday gaari ay ciidanku leeyihiin oo ka dhacay isla degaanka Buurane. Rasaas ay xilligaas fureen ciidanka AMISOM ayaa waxaa ku dhintay laba qof oo xoolo dhaqato ah.
Ciidamo burundi oo toogasho loogu geystay Shabeellaha Hoose
DHAGEYSO: Madaxweynaha Puntland oo sheegay inay ka jawaabayaan weerarkii Xabsiga Boosaaso
Aabe gabadhiisa u dilay xiriir ay wiil la sameysay!
12 Dalal oo Afrikaan ah oo la soo gaarsiiyay Talaalka Covid-19